साथ जुटेको तर साइत नजुरेको श्री मुक्तिनाथको यात्रा–१ | चितवन पोष्ट दैनिक
– विज्ञानलाल श्रेष्ठ
२०७८ बैशाख ११, शनिबार १३:३८ गते
आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन, मोटर खेल विकास र सुरक्षित यात्राको सन्देश पैmलाउने उद्देश्यले नेपाल अटोमोबाइल एसोसिएसन प्रदेश नं ३ र चितवन अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसनको संयुक्त आयोजनामा २०७७ चैत्र २० देखि २२ सम्म नारायणगढदेखि मुक्तिनाथसम्मको टुरिङ ¥यालीमा भरतपुर महानगरपालिकामा मेयर श्री रेनु दाहालज्यूले गर्नुभएको बिदाइ कार्यक्रमपश्चात् बिहानको करिब आठ बजे नारायणगढ रोटरी क्लबको तर्फबाट सहभागिता जनाउँदै हामी दुईवटा गाडीमा छ जना रोटरियन र एक स्पाउज गरी सात जना र टुरिङ ¥यालीका अन्य तेइसवटा गाडीमा अठासी जनासमेत ९५ जनाको जम्बो टोली मुक्तिनाथको यात्रामा निस्कियौँ । क्लबको तर्फबाट पूर्वअध्यक्ष अरूणकुमार पियाको गाडीमा उहाँकी धर्मपत्नी वन्दना पियाको साथमा रोटरियन देवमाया श्रेष्ठ र अजिता पियासमेत ४ जना र पूर्वअध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठको गाडीमा पूर्वअध्यक्ष सहनलाल प्रधान र मसमेत ३ जना थियौँ । हाम्रो गाडीको स्टेरिङ सहनलाल प्रधानले सम्हाल्नुभएको थियो ।
नारायणगढदेखि बेनीसम्मको यात्रा सहज नै भयो । कुश्माको वन्दना होटेलमा करिब २ बजेतिर खाना खायौँ । बेनीदेखि लेतेसम्मको यात्रा भने निकै चुनौतीपूर्ण बन्यो । तथापि, सहनलाल प्रधानको कुशल ड्राइभिङको कारणले त्यो दूरीमा भएका सबै बाधा–अड्चनहरुलाई सजिलै पार गर्दै यात्राको पहिलो बासस्थान लेतेसम्म रातको करिब नौ बजेतिर हामी पुग्यौँ । आयोजक कमिटीको तर्फबाट मित्र उज्ज्वल श्रेष्ठले बासस्थान र खानाको राम्रो प्रबन्ध लेतेमा मिलाउनुभएको थियो । यात्राको पहिलो रातपश्चात् दोस्रो दिनको पहिलो बिहानी निकै सुन्दर र मनमोहक दृश्यहरुको अवलोकन गरी नास्ता खाएर जम्बो टोली लेतेबाट करिब आधा घन्टाको दूरीमा रहेको लार्जुङको अटो जिमखाना स्थलतर्फ प्रस्थान ग¥यौँ । हामी सो स्थलमा पुग्दा आयोजक साथीहरुले अटो जिमखाना खेलको तयारी गर्दै थिए । केही समयको पखाईपछि हाम्रो क्लबको तर्पmबाट पूर्वअध्यक्षहरु अरूणकुमार पिया, चुननारायण श्रेष्ठ र सहनलाल प्रधानले सो खेलमा प्रतिस्पर्धाका लागि आआप्mनो नाम टिपाउनुभयो । खेल अति नै रोमाञ्चक तर जोखिमपूर्ण थियो ।
नियमानुसार सो खेलका लागि आवश्यक पर्ने ड्रेसको दुई लाख रूपैयाँ पर्ने र हेलमेटको कम्तीमा सत्तरी हजार रूपैयाँ लाग्ने खेलका विज्ञले प्रतियोगिताको दौरानमा सुनाउनुभएको थियो । तर, उक्त खेलमा प्रतिस्पर्धीहरुका लागि भने डे«स र हेलमेट अनिवार्य गरिएको थिएन । खेलको सुरूवाती बिन्दुबाट समाप्तिको बिन्दुसम्म आइपुग्न करिब ७० मिटरको दूरीमा दायाँबायाँ र बीचमा विभिन्न बाधा–व्यवधानहरु राखिएका थिए । यो अन्तराष्ट्रियस्तरको खेलमा खेलाडीहरुले आप्mनो सवारीसाधन एक्लै हाँकी चाँडोभन्दा चाँडो सो बाधा–व्यवधानहरु पार गरी खेलको अन्तिम बिन्दुसम्म पुग्नुपर्ने नियम थियो । खेलका उत्कृष्ट पाँच जना प्रतिस्पर्धीहरु अन्तिम चरणमा प्रवेश गर्ने बताइएको थियो । हाम्रो क्लबको तर्पmबाट केवल चुननारायण श्रेष्ठले खेलमा भएका सम्पूर्ण बाधा–व्यवधानहरु पार गर्दै कुशलताका साथ पहिलो चरणको प्रतियोगिता पार गर्नुभयो । अन्य दुई जना भने सफल हुन सक्नुभएन । तर, पहिलो चरण पार गर्न सफल हुनुभएका चुननारायण श्रेष्ठ पनि थोरै समयको अन्तरका कारण उत्कृष्ट पाँच जनाभित्र पर्न नसकेर अन्तिम चरणसम्म पुग्न सफल हुन सक्नुभएन । जे होस्, उहाँहरु तीनैजना साहसिक खेलमा सहभागी हुनुभएकोमा नारायणगढ रोटरी क्लब गौरव महसुस गर्दछ र म व्यक्तिगतरुपमा पनि हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु ।
खेलकै दौरानमा गाडीले हामीलाई ठूलो धोका दियो । आयोजक कमिटीले गाडीमा आउने समस्या समाधानका लागि यहाँबाटै टेक्निसियन टिम पनि लगेका थिए । तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, उहाँहरुबाट हाम्रो गाडीमा आएको समस्या समाधान हुन सकेन । अब भने हामी निकै चिन्तित भयौँ । मुक्तिनाथसम्मको यात्रामा निस्किएका हामी तीन पूर्वअध्यक्षहरु असमञ्जस स्थितिमा प¥यौँ । जहाँ समस्या त्यहाँ समाधान हुँदोरहेछ । पूर्वअध्यक्ष अरूणकुमार पियाको सात सिट भएको गाडीमा चार जनामात्रै थिए । हामी तीन जना पनि उहाँको सवारीसाधनमा अट्ने भयौँ । तर, लगेज भने अर्को सवारीसाधनमा राखेर जानुपर्ने भयो । खेल मैदानको नजिकै रहेको होटलमा स्वादिष्ट भोजन गरी हाम्रा सम्पूर्र्ण लगेजहरुलाई आयोजक कमिटीका संयोजक राजन पियाको गाडीमा राख्यौँ र हामी अरूणकुमार पियाज्यूको गाडीमा चढ्यौँ । हाम्रो गाडी भने सोही अटो जिमखाना खेल मैदानको छेवैमा रहेको एउटा होटलको साहूजीलाई जिम्मा दिएर हामी गन्तव्यतिर प्रस्थान ग¥यौँ ।
एउटै क्लबका हामी सात जना सँगै यात्रा गर्न पाउँदा हर्षित भयौँ । अबको हाम्रो बसाइँ सीधै मुक्तिनाथमा थियो । बाटोभरि रमाइला गफ, मनोरम दृश्यहरुको अवलोकन र फोटाहरु खिच्दै हामी अगाडि बढ्यौँ । तर, हामीलाई धोखा दिने हाम्रो गाडीको चिन्ता पनि उत्तिकै आइरहेको थियो । यात्राको क्रममा चुननारायण श्रेष्ठ र कार्यक्रम संयोजक राजन पियाले गाडीलाई आवश्यक सामानबारे कहिले पोखरा त कहिले बेनीमा रहेको शोरूमहरुमा मोबाइल सम्पर्क गर्दै पनि थिए । केही सामान पोखराबाट जहाजमा जोमसोमसम्म आउने तय भयो भने पोखरामा नपाइएका केही सामान बेनीबाट गाडीमार्पmत आउने कुराले हामी ढुक्क भयौँ ।
अरूणकुमार पियाज्यूको भरपर्दो ड्राइभिङमा हामीले कुनै शङ्का गर्ने ठाउँ थिएन । सोहीअनुरुप हामी अगाडि बढ्दै गयौँ । त्यसैगरी, खानेकुराको पनि केही कमी थिएन । गाडीभित्रै भाउजू वन्दना पिया, रोटरियनहरु देवमाया श्रेष्ठ र अजिता पियाले हामीलाई बेलाबेलामा खाजाको व्यवस्था गरिदिनुहुन्थ्यो । खाँदै, हाँस्दै र रमाउँदै लगभग तीन–चार घन्टाको समयमा हामी जोमसोम पुग्यौँ । जोमसोमबाट अगाडि बढ्दै जाँदा बीच बाटोमा एउटा सुन्दर पुल देखियो । हामी सबैको मन लोभियो । त्यहाँ केही समय रोकेर फोटाहरु खिच्यौँ । हावा भने मान्छे नै उडाउलाजस्तो गरी चलिरहेको थियो । त्यहाँ अरु केही क्षण बिताउन हामीलाई गाह्रो भयो ।
हामी सबै गाडीभित्र बसिसकेका थियौँ र अब पालो ड्राइभिङ सिटमा बस्ने अरूणकुमार पियाको थियो । ढोका खोलेर भित्र पस्नमात्र के लाग्नुभएको थियो, उहाँले लगाउनुभएको टोपी हावाले उडाएर लगिहाल्यो । त्यही पनि भेटिन्छ कि भनेर बडेमानको शरीर हुँदाहुँदै पनि उहाँ टोपीको पछाडि दौडनुभयो । करिब बीस मिटरको दूरीमा पुगेपछि उहाँले आप्mनो टोपी भेट्टाउनुभयो । सायद अरु एक मिटर अगाडि हावाको वेगले टोपी उडाएको भए सीधै पुलमुनिको नदीमा टोपीले पौडी खेलिरहेको हुन्थ्यो । आप्mनो प्यारो टोपी भेटिएला कि भनेर आप्mनो शरीरको पर्वाह नगरीकन हरेस नखाई दौडनुभएको त्यो दृश्य हाम्रो मानसपटलमा सधैँ ताजा रहनेछ ।
हामी मुक्तिनाथ नपुग्दै सो खेल मैदानमा छाडेर गएको हाम्रो बिग्रिएको गाडीलाई अर्को गाडीले तानेर जोमसोमको वर्कसपमा ल्याइपु¥याएको खबरले हाम्रो मन आल्हादित भयो । हामी ढुक्क भयौँ र अगाडि बढ्यौँ ।
मुक्तिनाथ जाने क्रममा तलतिर पर्ने कागबेनी जाने बाटोभन्दा माथिबाट पूरै पिच बाटो भेटिँदा हाम्रो मन फेरि हर्षले विभोर भयो । लगभग बेनीबाटै कच्ची बाटो, खाल्डाखुल्डी, पहाडी उकालो–ओरालो, बगरका बाटाहरु र एकतर्फी साँघुरो बाटाहरुलाई छिचोल्दै त्यहाँसम्म पुगेका हामी खुसी हुनु स्वाभाविकै थियो । जोमसोमबाट डेढ घन्टाको सुन्दर नाङ्गा पहाडहरु, हिमाली दृश्यहरु र पिच बाटो पार गर्दै करिब पाँच बजेतिर हामी मुक्तिनाथको होटलसम्म पुग्यौँ । हावाको वेग यहाँ कम थियो तर निकै चिसो वातावरण थियो । तापक्रम १ डिग्री रहेको थियो । होटलबाट फ्रेस भएपछि आयोजकले हामीलाई रात्रिभोजका लागि हामी बसेको होटलअगाडिकै अर्को होटलमा बोलाए ।
त्यहाँ सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिएको थियो । कार्यक्रमको सुरूवातमा अटो जिमखाना प्रतियोगिताका विजयीहरुलाई ट्रफी र प्रमाणपत्रहरु वितरण गरिएको थियो । त्यसैगरी, चितवनबाट मुक्तिनाथसम्मको टुरिङ ¥यालीमा आयोजकले निश्चित गरेको समयसीमाभित्र अनुशासनमा रही लेतेसम्म आप्mनो सवारीसाधन पु¥याएर प्रथम र द्वितीय हुनेहरुलाई पनि ट्रफी र प्रमाणपत्रको व्यवस्था गरिएको थियो । यसको छनोट प्रक्रियाका लागि भने प्रत्येकको सवारीसाधनमा जिपिएस जडान गरिएको थियो । सहभागीहरुका लागि पनि प्रमाणपत्रको व्यवस्था गरिएको थियो । तर, समयाभावको कारणले ती प्रमाणपत्रहरु त्यहाँ वितरण गरिएन । कार्यक्रमको समाप्तिपश्चात् रात्रिभोजको क्रममा सहनलाल प्रधानले आप्mनो गायन प्रस्तुत गरी सबैलाई नचाउन सफल हुनुभयो । उहाँले करिब चारवटा गीत गाउनुभयो । अन्य केही सहभागीहरुले पनि आआप्mनो गायनकला प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रम समाप्तिपश्चात् हामी आआप्mनो कोठातिर लाग्यौँ । रात अबेर भइसकेको थियो । भोलि बिहान आठ बजेभित्र नै नजिकै रहेको मुक्तिनाथ दर्शनका लागि जानुपर्ने थियो ।
तेस्रो दिनको बिहान सबेरै उठेर नुहाइधुवाइ गरी मुक्तिनाथ दर्शनका लागि छोटो चढाइ सुरू ग¥यौँ । लेक लाग्ने सम्भावना पनि उत्तिकै थियो । डराइडराइ बिस्तारै हामी उकालो चढ्दै गयौँ । म भने अलिकति उकालो चढ्दै आराम गर्दै अगाडि बढेँ । मेरो साथमा पूर्वअध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो । उहाँ भने निकै स्पूmर्तिका साथ मलाई सम्हाल्दै अगाडि बढ्नुहुन्थ्यो । उहाँसँग यो यात्राभन्दा अगाडि सिराइचुलीमा पनि सँगै गएका थियौँ । त्यहाँ पनि उहाँ निकै स्पूmर्तिका साथ हौसला दिँदै अगाडि बढ्नुहुन्थ्यो । उहाँको साथले यसपटक मुक्तिनाथ दर्शन गर्न सजिलो भयो ।
मुक्तिनाथको यात्रा मेरो लागि यो दोस्रोपटकको यात्रा थियो । पहिलोपटकको मुक्तिनाथ दर्शनमा १०८ धारामा नुहाउन र मन्दिरअगाडिका दुईवटा कुण्डमा नुहाउन सकिएको थिएन । तर, यसपालि जसरी पनि उक्त धाराहरु र कुण्डहरुमा नुहाउन घरैबाट प्रण गरेर गएको थिएँ । सफल पनि भएँ । तर, कुण्डबाट पैसाको ढ्याक निकाल्न भने बिर्सिएँ । हामीले मुक्तिनाथको दर्शन गरिसकेपछि अरूणकुमार पिया र सहनलाल प्रधान आइपुग्नुभयो । सहनलाल प्रधान केही अस्वस्थ हुनुभएकोले उहाँले स्नान गर्नुभएन । अरूणकुमार पिया भने १०८ धाराहरुमा नुहाएपछि कुण्डमा डुब्न छिर्नुभयो । उहाँमा के शक्ति आयो कुन्नि, त्यति चिसो पानीको कुण्डबाट निस्कनै चाहनुभएन । पहिलो कुण्डबाट निस्कनुभएपछि दोस्रो कुण्डमा त झन् बढी समय बिताउनुभयो । मैले उहाँलाई त्यहाँबाट पैसाको ढ्याक निकालेर ल्याउन अनुरोध गरेँ । आप्mनो लागि एउटामात्रै ढ्याक ल्याउनु भनेको त हामी सबैलाई पुग्ने गरी र अरुलाई समेत दिनका लागि दस–पन्ध्रवटै पैसाका ढ्याकहरु लिएर आउनुभयो र हामी सबैलाई बाँड्नुभयो ।
मुक्तिनाथ दर्शन र पूजाआजापश्चात् ठूलो बुद्धको मूर्ति भएको स्थान हुँदै अल्लि तल रहेको ज्वालामाईको दर्शन गरी चुननारायण श्रेष्ठ र म होटलतर्फ लाग्यौँ । केही समयपछि हाम्रो टोलीका सम्पूर्ण सदस्यहरु होटलमा आइपुगे, बिहानीको नास्तापछि हामी कागबेनीका लागि प्रस्थान ग¥यौँ । त्यतिबेला हाम्रो बिग्रेको गाडीका निम्ति पोखराबाट मगाइएको सामान जोमसोमको वर्कशपमा आइपुगेको सुसमाचारले हामीलाई खुसी बनायो । तर, बेनीबाट मगाएको सामान भने दिउँसोमात्र आइपुग्ने कुरा थाहा भयो । जे होस्, ढिलो भए पनि त्यही दिन हाम्रो गाडी बनेर त्यसैमा घर फर्कन पाउने कुराले भने हामी मनमनै खुसी भयौँ । तेस्रो दिनको बेलुकीसम्म गाडी बन्ने र चौँथो दिनमा घर फर्कने भन्ने हाम्रो सल्लाह भएअनुसार हामीले उक्त दिन जोमसोममा बास बस्ने निधो ग¥यौँ । त्यसैअनुरुप हामी मुक्तिनाथबाट सीधै कागबेनीतर्पm प्रस्थान ग¥यौँ । कागबेनीमा पुगेपछि पितृहरुलाई सम्झेर कागबेनीको पानी छुन पाउँदा मन अल्लि हलुङ्गो भएको मैले महसुस गरेँ । पूर्वअध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठज्यूले पनि त्यस्तै महसुस गर्नुभयो । त्यसैगरी, क्लबका पूर्वअध्यक्षहरु अरूणकुमार पिया र सहनलाल प्रधानज्यूले आआप्mना पितृहरुलाई सम्झेर ब्राह्मणको सहयोगले कागबेनीमा पितृ उद्धार कार्य सम्पन्न गर्नुभयो ।
यसपछि हामीले कागबेनीबाट एक–डेढ घन्टाको बाटोमा पर्ने छुसाङ भन्ने ठाउँमा जाने निर्णय ग¥यौँ । हामी अगाडि बढ्यौँ । रमणीय दृश्यहरु हेर्दै छुसाङ पनि पुग्यौँ । मोबाइलको क्यामेरामा केही फोटोहरु कैद गरी हामी केही समयपछि त्यहाँबाट फर्कियौँ । लगभग आधा बाटो पार गरेपछि हाम्रो गाडीको पछाडिको एउटा टायर पञ्चर भएको थाहा पायौँ । अब अर्को स्पेयर टायर फेर्नुको विकल्प थिएन । त्यसैले ढिलो नगरी चुननारायण श्रेष्ठ, म र अरूणकुमार पिया मिलेर टायर फेर्न लाग्यौँ । करिब आधा घन्टामा टायर फेर्न हामी सफल भयौँ । त्यसपछि बिनाबाधा–अड्चन हामी हाम्रो गन्तव्य जोमसोम पुग्यौँ । जोमसोमको ओम होटलमा पुगेपछि हामी गाडी बनाउँदै गरेको वर्कशपमा पुग्यौँ । राति अबेरसम्ममा नयाँ सामान फेरेर गाडी तयार हुन्छ भन्ने आश्वासन मिस्त्रीबाट हामीलाई प्राप्त भयो । हामी ढुक्क भयौँ र होटलमा फक्र्यौं । होटलमा फर्केपछि राति खाना खाएपश्चात् भोलिपल्ट चौँथो दिन घर फर्कने आशाका साथ सुत्यौँ ।
बिहान सबेरै उठेर अरूणकुमार पिया र चुननारायण श्रेष्ठज्यू वर्कशपमा गाडीको अवस्था बुझेर फर्कनुभयो । सहनलाल प्रधानज्यू र म ओछ्यानमै थियौँ । जोमसोमको तापक्रम बिहान ४ डिग्री रहेकोले पनि हामीलाई ओछ्यान छाड्न पटक्कै मन थिएन । तथापि, घर फर्कनुपर्ने भएकोले उठ्नैपर्ने भयो । उहाँहरु दुई जना गाडीको अवस्था हेरेर होटलमा फर्कनुभयो, तर भनेको समयमा गाडी नबन्ने खबरले हामी दुःखी भयौँ । हामीसँगै जानुभएका दुई जना रोटरियन भाउजूहरु देवमाया श्रेष्ठ र अजिता पिया गाडी बनेर बेलुकासम्म घर पुग्ने कुरामा ढुक्क हुनुहुन्थ्यो । तर, सो खबरले उहाँहरु हतास हुनुभयो र उहाँहरुका अनुहार अल्लि अँध्यारो देखियो ।
बिहानको ९ बजिसकेको थियो । अरूणकुमार पिया, वन्दना भाउजू र म हवाईजहाजको टिकट बुभ्mनका लागि हामी बसेको होटलअगाडि नै रहेको टिकट बुकिङ काउन्टरमा गयौँ । संयोग पनि कस्तो रह्यो भने टिकट काउन्टरमा रहनुभएको दाजु केही दिनअघिमात्रै अरूणकुमार पियाको निवासमा जानुभएको रहेछ । नाताले उहाँ अरूणकुमार पियाकी भाइबुहारी विद्याको फुपाजू हुँनुहुँदो रहेछ । हामी बसेको होटल ओम (हिन्दी चलचित्र ‘खुदा गवाह’को सुटिङ ताका अमिताभ बच्चन र श्रीदेवी बसेको होटल) पनि बुहारी विद्याका बाआमाले स्थापना गरी सात वर्षअघिसम्म आफैँले सञ्चालन गर्नुभएको र अहिले त्यो होटल लिजमा अरुलाई सञ्चालन गर्न दिइएको रहेछ । हामीलाई अब भने सजिलो भयो र दुईवटा टिकटको व्यवस्थापन पनि भयो । आप्mनो मान्छे हुनाले सहुलियत दरको टिकट पनि प्राप्त भयो । चवालीस सय रूपैयाँ पर्ने हवाई टिकट अठ्ठाइस सय छपन्न रूपैयाँमा मिलाइदिनुभयो । साथै, मीठो कफीसँगै घरमै बनाएको निम्किन पनि खाइयो ।
यति भएपछि हामी पनि ढुक्क भयौँ । रोटरियन भाउजूहरु देवमाया श्रेष्ठ र अजिता पिया समयमै घर पुग्ने भए । हामीलाई अर्को संयोग पनि मिल्यो, हाम्रो क्लबका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र ओली आप्mनो व्यावसायिक काम विशेषले पोखरा आउनुभएको रहेछ । उहाँसँग हाम्रो सम्पर्क भयो र सारा वृत्तान्त सुनाएपछि ओलीजीले आप्mनो व्यावसायिक कार्यव्यस्तताका बाबजुद पनि उहाँहरु दुवैजनालाई एयरपोर्टमा गएर रिसिभ गर्ने निश्चित भयो । लगभग बिहानको ११ः३० बजे उहाँहरु पोखरा एयरपोर्टमा सुखद ल्यान्डिङ गरेको र ओलीजीले दुवैजनालाई रिसिभ गर्नुभएको खबर प्राप्त भयो । हामी ढुक्क भयौँ । अब भने हामी अरूणकुमार पिया, उहाँकी धर्मपत्नी वन्दना पिया, चुननारायण श्रेष्ठ, सहनलाल प्रधान र म गरी पाँच जनामात्रै जोमसोममा बाँकी भयौँ । अरूणकुमार पिया र उहाँकी भाइबुहारी विद्याबीच मोबाइलमा अन्य घुम्नुपर्ने रमणीय स्थलहरुका बारेमा कुराकानी भइरहेको थियो । यसैक्रममा हामी पुनः गाडीको अवस्था हेर्न वर्कशप पुग्यौँ । मिस्त्रीबाट दुई घन्टामा गाडी बन्ने आश्वासन पाएपछि मार्फा गाउँको भ्रमण गर्ने सोच बनायौँ ।
अति रमणीय गाउँ रहेछ मार्फा । धेरै नेपाली चलचित्र र साङ्गीतिक भिडियोहरु खिचिएको मार्फा गाउँ निकै सुन्दर र मनमोहक रहेछ । त्यहीँको एक जना भाइले हामीलाई मार्फा गाउँ घुमाइदिनुभयो । त्यसपछि हामी पाँचैजना विद्या बहिनीको माइतीघर पुग्यौँ । हामीलाई उहाँकी आमाले न्यानो स्वागत गर्नुभयो । आप्mनै बारीमा फलेको ओखरहरुका साथ आप्mनै बारीको स्याउ र स्याउको जुस अनि मीठो कफी, बिस्कुट खुवाउनुभयो । घरअगाडि नै आप्mनै स्याउबारीहरु रहेछन् । साथै, स्याउबाट बन्ने रक्सी र वाइनका उद्योगसमेत खोल्नुभएको रहेछ । स्याउ फल्ने सिजन नहुनाले हामीले बोटहरुमा लटरम्म फलेका स्याउहरु भने हेर्ने सौभाग्य पाएनौँ । विद्या बहिनीको बुबा काम विशेषले काठमाडौँ जानुभएको रहेछ । हाम्रो दुर्भाग्य, उहाँसँग भेट हुन सकेन । अझै धेरै थिए त्यहाँ घुम्नुपर्ने ठाउँहरु, तर समयाभावको कारणले हामीलाई त्यो साइत जुरेन । हामीलाई फर्कनुपर्ने बाध्यता थियो । मनले नमानी नमानीकन पनि हामी मार्फाबाट गाडी बनाउने वर्कशप जोमसोम पुनः फर्कियौँ ।
अभैm गाडी बनिसकेको रहेनछ । अलिकति निराश भयौँ । गाडीमा नयाँ फेरिएको पुर्जाले काम गरेन । अब फेरि दोस्रोपटक जोमसोमकै बास हुने भयो भन्ने चिन्ताले हामीलाई सताउन थाल्यो । मिस्त्रीले त्यहाँ नजिकै रहेको अर्को पार्टपुर्जाको पसलमा गएर नयाँ पुर्जा लिएर आउँदा भने अलिकति राहत महसुस भयो । मिस्त्रीले सो पुर्जा पुनः जडान गरे । यसपल्ट भने सो फेरिएको पुर्जाले काम गरेको चुननारायण श्रेष्ठले बताउनुभएपछि हामी खुसी भयौँ । उहाँ आफैँ खटेर गाडी मर्मतका लागि मेहनत गर्नुभएको थियो । अब भने गाडी पूर्णरुपमा बनेर चल्नका लागि तयार भएको थियो ।
गाडी बनाउँदै गर्दाको क्रममा हामीले विद्या बहिनीको सल्लाहअनुसार नाउरीकोट भ्रमण गर्ने निधो ग¥यौँ । सोहीअनुरुप बनेको गाडीमा चुननारायण श्रेष्ठ र म अनि अरूणकुमार पियाको साथमा उहाँकी धर्मपत्नी वन्दना पिया र सहनलाल प्रधान नाउरीकोटका लागि प्रस्थान ग¥यौँ । हाम्रो गाडी बिग्रेको ठाउँ लार्जुङबाट करिब २.४ किमी माथि पहाडी क्षेत्रमा पर्ने नाउरीकोट निकै नै सुन्दर, हरियाली थियो । लेतेबाट मुक्तिनाथसम्मको यात्रामा केवल उजाड पहाडमात्र देखिएकोले पनि होला, हामीलाई नाउरीकोट पुग्दा त्यहाँको वातावरण पूरै हरियाली र उमङ्गले भरिएको महसुस भयो ।
तर दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ, देशैभरि तुवाँलोले ढाकिरहेको अवस्थामा नाउरीकोटले पनि त्यो समस्या भोगिरहेको देखियो । टाढा–टाढासम्म देखिने सौन्दर्यताको अनुभव हामीले गर्न पाएनौँ । नेपाली चलचित्र कबड्डीमा नाउरीकोटको सुन्दर दृश्यहरु कैद गरिएका छन् । जापानको राष्ट्रिय फूल साकुरा नाउरीकोटमा समेत देखियो । सुनिएको थियो, साकुरा फूल नेपालबाटै जापान पठाइएको हो । तर, पर्याप्त प्रमाण नभएता पनि जापानीहरु हिमाली देशबाट साकुरा आएको कुरामा विश्वस्त छन् ।
विद्या बहिनीको आफन्तको राम्रो एउटा लज थासाङ भिलेज नामको होटल रहेछ नाउरीकोटमा । त्यहाँभित्रको सजावट प्राचीनकालको जस्तो छ भने बाहिरी आवरण आधुनिक छ । हेलिप्याडसमेत भएको नाउरीकोटको उक्त होटलको बगैँचा निकै सुन्दर छ । केही नेपाली तथा विदेशी पाहुनाहरु हेलिकप्टरबाट नाउरीकोट आउने–जाने गर्दा रहेछन् । सोही होटलमा खाना खाएर हामी नाउरीकोटको छोटो बसाइँपछि त्यहाँबाट प्रस्थान ग¥यौँ । हामीलाई सोही दिन नारायणगढ फर्कनुपर्ने थियो । बिस्तारै ओरालो झर्दै कतै साँघुरो, कतै फराकिलो बाटो र कतै खाल्डाखुल्डीका व्यवधानहरु पन्छाउँदै हामी आप्mनो गन्तव्यतिर लाग्दै ग¥यौँ । यहाँ एउटा कुराको स्मरण भयो र उल्लेख गर्न चाहेँ, मार्फाबाट फर्कने क्रममा हामीलाई एउटा बसबाट महिला यात्रुले गाडी रोक्नका लागि अनुरोध गर्नुभयो । हामीले गाडी रोक्यौँ र ती महिला यात्रुले एउटा खाजाको पोका दिएर त्यो खाजा उहाँहरु आउनुभएको गाडीको ड्राइभरलाई दिनका लागि भनिन् । हामीले कारण र विवरण बुभ्mदा उहाँहरुले मुक्तिनाथका लागि ल्याएको त्यो गाडी लेतेभन्दा केही वर बिग्रेर बसेको र वरपर कुनै पनि होटल, दोकानहरु नभएको थाहा पायौँ । हामी पनि त्यही समस्याबाट गुज्रिएर आएकोले त्यति सानो मद्दत गर्नु उचित ठान्यौँ र ड्राइभरका लागि उनले दिएको खाजा लियौँ । खाजा त हाम्रो साथमा थियो, तर नाउरीकोटबाट अर्कै बाटो हुँदै फर्कनु परेको कारणले ती ड्राइभर नभेट्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता पनि लाग्न थाल्यो । निकै पर पुग्दा पनि त्यो गाडी र ड्राइभर भेट्न सकेका थिएनौँ । हामी अघि वढ्दै गयौँ । मनमा कुराहरु खेल्दै थियो, ड्राइभर भेटिएन भने के गर्ने ? खाजा कसलाई दिने ? सोच्दासोच्दै एउटा पुल आइपुग्यो र त्यहाँनिर एउटा गाडी रोकिएको देखियो । हामी रोकियौँ र ड्राइभरलाई सोध्यौँ । ती महिलाले भनेकै जस्तो मान्छे थियो त्यो ड्राइभर । कुरा मिल्यो र हामीले उनलाई ती महिलाले पठाएको खाजा दियौँ । गाडीको समस्याबारे सोध्यौँ र मेकानिक्स आउँदै गरेको पनि थाहा पायौँ । खाजा पाएपछि ती ड्राइभर खुसी भए र हामी पनि अर्काको नासो बुझाउन सफल भएकोमा खुसी भयौँ । क्रमशः